Iifilitha zobhaka ze-aquariums: ezona modeli zisebenzayo kunye nezithuleyo | Ngeentlanzi
Iifilitha zobhaka ze-Aquarium
UNatalia Cerezo | | Izixhobo
Iifilitha zobhaka lukhetho olufanelekileyo kwi-aquarium, enkulu okanye encinci, kwaye ayinamsebenzi nokuba ungumntu omtsha kwintlanzi okanye unamava amahle. Zizixhobo ezipheleleyo ezihlala zibonelela ngeendlela ezintathu zokucoca, ukongeza kwezinye izinto ezinomdla kakhulu.
Kweli nqaku siza kuthetha ngeefilitha zobhaka ezahlukeneyo, ziyintoni, indlela yokuzikhetha kunye nokuba zeziphi iimveliso ezingcono. Kwaye, ukuba unomdla kwisifundo kwaye ufuna ukuzazisa nzulu, sicebisa ukuba ufunde eli nqaku Iifilitha ze-aquarium.
1 Iifilitha zobhaka ezilungileyo kakhulu zasemanzini
2 Yintoni isihluzi sobhaka
3 Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kolu hlobo lokucoca ulwelo
4 Iimpawu zebhokisi yokuhluza ezilungileyo
5 Uyikhetha njani i-backpack filter ye-aquarium yethu
5.1 Intlanzi ye-Aquarium
5.2 Imilinganiselo ye-Aquarium
6 Sesiphi isihluzi esinebhegi ethuleyo?
7 Ngaba unokufaka isihluzo sasebhaka kwitanki leentlanzi?
Iifilitha zobhaka ezilungileyo kakhulu zasemanzini
I-Blau Aquaristic 7700060 ...
I-AstroAqua-Icebo lokucoca ubhaka ...
Icebo lokucoca ulwelo C2
Isixhobo sokucoca iBPS ...
Isixhobo sokucoca iMarina Slim 15, 57 ...
Yintoni isihluzi sobhaka
Iifilitha zobhaka zezinye zeentlobo ezithandwayo zeefilitha ze-aquarium. Njengoko igama lisitsho, baxhonywe komnye wemiphetho ye-aquarium, njengobhaka wobhaka. Umsebenzi wayo ulula, kuba bafunxa nje amanzi baze bagqithe kumacebo abo okucoca ngaphambi kokuba bawalahle, ngokungathi yingxangxasi, ibuyele kwitanki leentlanzi, sele licocekile kwaye lingenamdaka.
Iifilitha zobhaka Zihlala zibandakanya iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zokucoca ulwelo Abajongene nokwenza olona hlaselo luqhelekileyo lufunwa zii-aquariums. Ukucoca ngoomatshini, eyokuqala apho amanzi adlula khona, icebo lokuhluza lisusa ukungcola okukhulu. Ekuhluzeni imichiza, amasuntswana amancinci ayasuswa. Okokugqibela, kuhluzo lwendalo kwenziwa inkcubeko yebhaktiriya eguqula izinto eziyingozi kwintlanzi zibe zezingenabungozi.
Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kolu hlobo lokucoca ulwelo
Iifilitha zobhaka zinenombolo ye izinto eziluncedo nezingalunganga oko kunokuba luncedo xa ukhetha ukufumana isihluzo solu hlobo okanye hayi.
Olu hlobo lwecebo lokucoca ulwelo line inani elikhulu lezibonelelo, ngakumbi ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo ngokungafaniyo, okuyenza inyathelo elifanelekileyo nakuliphi na umkhwetha:
Ziyi- imveliso epheleleyo kakhulu kunye nokuguquguquka okukhulu okuhlala kubandakanya iintlobo ezintathu zokucoca esiziphawulileyo (ngoomatshini, imichiza kunye nebhayoloji).
Batyekele ekubeni ne Ixabiso elilungisiweyo.
Baye kakhulu Kulula ukuhlangana kunye nokusebenzisaKungenxa yoko le nto becetyiswa kakhulu kubaqalayo.
Sukuthatha indawo ngaphakathi kwi-aquarium.
Okokugqibela, ngesiqhelo ukugcinwa kwayo akubizi kakhulu (ngokwexesha, ngaphezulu okanye ngaphantsi kweeveki ezimbini kuxhomekeke kumthamo kunye nokungcola okuqokelelwa kwi-aquarium, kunye nemali).
Nangona kunjalo, olu hlobo lwecebo lokucoca ulwelo nalo ineengxaki ezithile, ingakumbi ezinxulumene neentlobo ezibonakala zingayinyamezeliyo kunye nezinye:
Olu hlobo lokucoca ulwelo azikhuthazwa ii-aquariums ezinee-prawns, kuba banako ukubanya.
Ku Iintlanzi ze-betta azinamdla nazonjengoko isihluzo sibangela umsinga wamanzi ekunzima kuwo ukudada.
El icebo lokucoca ulwelo kuhlala kungalunganga kakhulu okanye, ubuncinci, ukunganiki iziphumo ezilungileyo njengezinye ezimbini.
Kwangokunjalo, izihluzi zobhaka ngamanye amaxesha azisebenzi kakuhlenanjengoko benokuphinda bahlaziye amanzi abasandula ukuwakha.
Iimpawu zebhokisi yokuhluza ezilungileyo
Kwimarike esinokuyifumana Iimpawu ezintathu zokumkanikazi xa kufikwa kwiifilitha zobhaka Oko kuyakuba kukujongana nokucoca amanzi kwi-aquarium yakho de kube ngathi ijethi yegolide.
I-AquaClear 50 Isihluzo ...
Sele sithethile malunga Iifilitha ze-AquaClear kutshanje. Alithandabuzeki elokuba lolona phawu lucetyiswayo zezona ngcali kunye nabasandul 'ukungena emanzini. Nangona kubonakala ukuba inexabiso elithe kratya kunamanye, umgangatho weemveliso zawo awunakuphikiswa. Iifilitha zayo zahlulwe ngokomthamo kwiilitha zamanzi kwi-aquarium yakho. Ukongeza, bathengisa iindawo zokucoca ulwelo (iziponji, amalahle ...).
Iifayile zolu phawu banokusebenza iminyaka kunye nosuku lokuqala. Kuya kufuneka wenze ulondolozo oluchanekileyo ukuze injini ingatshi.
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle ...
Uphawu lwaseJamani oluthi ugqwesa ekwenzeni iimveliso ezinxulumene namanzi, nokuba zii-aquariums okanye iigadi. Iifilitha zayo, izicoci zegrabile, ukucacisa, ukuhambisa iintlanzi okanye izifudumezi ze-aquarium. Luphawu olunomdla kakhulu elingathengisi izixhobo kuphela, kodwa kunye neendawo ezikhululekileyo kunye nemithwalo yeefilitha zalo.
Into enomdla kukuba, iimpompo zamanzi zalo mvelisi, ezazenzelwe ukuba zenziwe emanzini zikhona usebenzisa umxholo wekhompyuter kwiiseva ezipholileyo ngendlela eqhubekayo, ephantsi kunye nendlela efanelekileyo.
Isihluzi sangemva ...
Tidal ngu Olunye uphawu oluphezulu esinokuthenga ngalo izihluzi zobhaka yolwandle. Inxalenye yeSeachem, elebhu e-United States enikezelwe ngokukodwa kwiimveliso zamachiza, umzekelo, izikhuthazi, ulawulo lwe-phosphate, iimvavanyo ze-ammonia ..., nangona ikwabandakanya iimpompo zamanzi okanye amacebo okucoca ulwelo.
Iifilitha zeTidal zidume ngokubonelela ngeempawu ezingafakwanga kwezinye iimveliso yeefilitha, umzekelo, inqanaba lamanzi eliguqukayo okanye isicoci senkunkuma esiqokelelana ngaphezulu kwamanzi.
Uyikhetha njani i-backpack filter ye-aquarium yethu
Ukukhetha isihluzo sobhaka esifezekisa iimfuno zethu kunye nezo zeentlanzi zethu kunokuba ngumceli mngeni. Kungenxa yoko le nto sikunika oku uthotho lweengcebiso zokugcina engqondweni:
Kuxhomekeka kwintlanzi esinayo kwi-aquarium, siya kufuna uhlobo oluthile lokucoca ulwelo okanye olunye. Umzekelo, njengoko besitshilo, kunqande ukuhluza ubhaka ukuba une-shrimp okanye i-betta fish, kuba abazithandi ezi zihluzo. Kwelinye icala, ukuba uneentlanzi ezinkulu ezingcolileyo ke, khetha isihluzo sasebhaka esinokucoca ulwelo olunamandla. Okokugqibela, ukuhluza okuhle kwebhayoloji kubaluleke kakhulu kwi-aquariums eneentlanzi ezininzi, kuba kungenjalo ulungelelwaniso olunqabileyo lwendalo lunokonakaliswa.
Umlinganiso we-aquarium ngu ibaluleke ngokulinganayo xa ukhetha icebo lokucoca ulwelo okanye enye. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba, ngaphambi kokuthatha isigqibo kwimodeli enye okanye enye, ubala ukuba yeyiphi indawo enamanzi kwi-aquarium kwaye ungakanani amanzi ofuna ukuba isihluzi siqhubekeke ngeyure ukuyigcina icocekile. Ngendlela, iifilitha zobhaka zilungele ngokukodwa ii-aquariums ezincinci neziphakathi. Okokugqibela, ikwalicebo elilungileyo ukuthathela ingqalelo indawo oza kuyibeka kuyo i-aquarium, kuba icebo lokucoca ulwelo liya kufuna indawo encinci emaphethelweni, ngenxa yoko ayonzakalisi ukujonga imilinganiselo ukuba, umzekelo, unayo i-aquarium eludongeni.
Ngokwenyani uhlobo lwe-aquarium aluyongxaki kwiifilitha zobhaka, ngokuchaseneyo, kuba ngenxa yokuguquguquka kwazo, zilingana kakuhle nakweliphi na igumbi. Ziyacetyiswa nakwindawo ezityaliweyo zasemanzini, kuba ityhubhu ekufunxa ngayo amanzi kulula kakhulu ukuyifihla elukhula. Nangona kunjalo, khumbula ukuba okwangoku okuveliswe zezi ntlobo zeefilitha zomelele kakhulu.
Sesiphi isihluzi esinebhegi ethuleyo?
Kubaluleke kakhulu ukukhetha ifayile ye- coca cofa ukuze ungafuni ukuxinzelela intlanzi yakho… Okanye kwa ngokwakho, ngakumbi ukuba une-aquarium esekwe egumbini. Ngale ngqiqo, iimveliso ezibalaseleyo ekuboneleleni ngezihluzo ezingathethiyo ngu-Eheim kunye no-AquaClear.
Nangona kunjalo Icebo lokucoca ulwelo linokukhupha ingxolo kwaye licaphukise nangaphandle kokuba libe nesiphene. Ukuyiphepha:
Nika i-injini ixesha lokuziqhelanisa. Kwiintsuku ezimbalwa emva kokukhutshwa kwesihluzi esitsha, injini kufuneka iyeke ukwenza ingxolo enkulu.
Jonga ukuba akukho litye okanye nayiphi na intsalela ebambekile oko kunokubangela ukungcangcazela.
Unako kwakhona beka into phakathi kweglasi kunye nefilitha ukunqanda ukungcangcazela.
Ukuba into ekukhathazayo yingxangxasi yamanzi acocekileyo aphuma kwisihluzi, zama ukugcina inqanaba lamanzi liphezulu kakhulu (kuya kufuneka uphinde uyigcwalise rhoqo emva kweentsuku ezintathu okanye ezine) ukuze isandi sengxangxasi singangxoli.
Ngaba unokufaka isihluzo sasebhaka kwitanki leentlanzi?
Nangona kukho iifilitha zobhaka ezilungiselelwe ngokukodwa i-nano aquariums, inyani yile kwitanki leentlanzi ngesihluzo sesiponji siza kuba sanele. Njengoko besesitshilo apha ngasentla, izihluzo zempompo zamanzi zibangela umsinga owomeleleyo onokuchaphazela kakubi iintlanzi zethu okanye ubabulale, umzekelo, ukuba zii-shrimp okanye iintlanzi zabantwana.
Kungenxa yoko le nto kungcono ukuba sikhethe i Icebo lokucoca isiponji, kuba alinayo nempompo yamanzi enokuginya iintlanzi zethu ngempazamo, into enokubakho kwamanani ayo inyuka ngokucacileyo isithuba esincinci. Iifilitha zesiponji zichanekile ngokuchanekileyo ngegama lazo: isiponji esihluza amanzi kwaye, emva kweeveki ezimbini zokusebenzisa, ikwasisicoci sebhayoloji, kuba iphela ineebhaktiriya eziluncedo kwitanki yentlanzi ecosystem.
Ngakolunye uhlangothi, Ukuba unayo itanki enkulu yeentlanzi, kukho izihluzi ezinenjini, Kodwa yenzelwe iindawo ezinamanzi amancinci kakhulu.
Siyathemba ukuba sikuncede ukuba uqonde ngcono umhlaba wokuhluza ubhaka ngeli nqaku. Khawusixelele, ngaba ukhe walusebenzisa olu hlobo lokuhluza i-aquarium? Athini amava akho? Ngaba ucebisa naluphi uhlobo lophawu okanye imodeli?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Iifilitha zobhaka ze-Aquarium
Iingcamango ezi-6 zokuhombisa i-aquarium